Alaabada Apple | Wararka IPhone
Dhammaan wixii ku saabsan Wax soo saarka Apple taasi ma aha iPhone, war kasta oo Apple la xiriira oo aan ku xirneyn iPhone si gaar ah. Waxaan ka hadli doonaa dukaanka barnaamijka app Store, iDevices kale sida Apple TV, iPad, iPod Touch; iyo adeegyada sida iTunes, iCloud iyo guud ahaan wax soo saar kasta oo aan iPhone ahayn laakiin la xiriira Apple iyo wararka ku xeeran.
Ma leedahay PS5? Sony wuxuu ku siinayaa lix bilood oo bilaash ah Apple TV +
by Kariim Hmeidan samee 3 maalmood .
Qaadashada PS5 waxay caqabad ku tahay heerka ugu sarreeya ee tartanka Ciyaaraha Olambikada. Ma jiro, iyo ...
by Jordi Gimenez samee 4 maalmood .
Sida xaqiiqda ah inbadan oo idinka kamid ah si lamid ah aniga oo kale ayaa udhacay, mar unbaa gurigiina guuldarro ...
by Jordi Gimenez samee 5 maalmood .
Shirkada caanka ah ee Aqara ee leh alaabooyin iyo qalabyo la jaan qaadi kara Apple's HomeKit ayaa horeyba qaar uga mid ah ...
Soosaarka ballaaran ee jiilka saddexaad ee AirPods ayaa loo qorsheyn doonaa inuu bilowdo inta lagu jiro bisha Ogosto ...
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'Beats Studio Buds' ayaa hadda laga heli karaa Spain
by Ignacio Sala samee 5 maalmood .
In yar uun bil ka hor, Apple wuxuu soo saaray Beats Sutdio Buds, sameecado sameecado ah oo suuqa ku dhacay waxyar kadib, ...
Tilmaamaha talooyinka nadaafadda ee Apple ee aaladahayaga: "Weligaa ha caddeynin ama hawo-hydrogen peroxide"
by Jordi Gimenez samee 6 maalmood .
Way cadahay in adeegsade kasta uu leeyahay qaabkiisa nadiifinta ama qaboojinta iPhone, iPad, Mac, AirPods, meelaha durugsan ...
Apple wuxuu Fakespot ka eryaa AppStore-ka, maxaa yeelay Amazon?
by Miguel Hernández samee 7 maalmood .
Apple wuxuu sii wadaa inuu si dhakhso leh uqabto illaa inta heerarkiisu khuseeyo, App Store waa barxadiisa xeebta aan la gariirin karin iyo ...
Nuqulada AirPods waxay Apple ku kacday hanti badan
Shirkadda Cupertino waxay soo saartay bishii Diseembar 2016 dhagaha dhagaha runta ah ee wireless, sida had iyo jeer, waxay ahaayeen mawduucyo badan ...
Dib u dhig lacagaha Apple Pay oo leh Apple Pay Goor dambe
by Jordi Gimenez samee 7 maalmood .
Shirkadda Cupertino ayaa ka shaqeyneysa adeeg cusub oo ay ugu magac dareen Apple Pay Later oo ay ...
Apple TV + wuxuu ku guuleystaa seddex Emmys waxyaabaha maalinlaha ah
by Ignacio Sala samee 7 maalmood .
Abaalmarinta Emmy waxaa loo yaqaanaa ugu horreyn inay tahay abaalmarinta ugu muhiimsan ee warshadaha telefishanka, si kastaba ha noqotee…
Apple Music iyo taxaddarkeeda marka laga hadlayo isbeddelada ku dhaca muusikada muusikada
Adeegyada qulqulka muusikada ayaa gumeystay bulshada. Far waa ku guuleysiga iibka ee cajaladaha jireed ilaa ...
iCloud ee Windows, wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Apple Watch iyo Waxqabadka, furayaasha fahamkiisa
Sida loo ogaado IMEI-ka iPhone-kaaga
Halkee ayuu iTunes ku kaydiyaa qalabka lagu soo dejiyo ee laga soo dejiyo iPhone, iPad?
Sida looga codsado lacag celin App Store si toos ah iPhone